Bartilmaameedka Chelsea iyo Man United ee Kai Havertz oo la ogaaday Kooxda uu door-bidayo inuu ku biiro – Gool FM
Bartilmaameedka Chelsea iyo Man United ee Kai Havertz oo la ogaaday Kooxda uu door-bidayo inuu ku biiro
Haaruun June 17, 2020
(London) 17 Juun 2020. Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay dhabar jab kala kulmeen dalabkoodii ay ku doonayaan kubadsameeyaha kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz.
Tan iyo bilowgii 2020 xiddigan ka ciyaara horyaalka Bundesliga ayaa aad loola xiriirinaya kooxo dhowr ah xilli 21-sano jirkaan ay macquul tahay inuu iskaga tago kooxdiisa Leverkusen.
Dhowaan, waxaa la sheegay in Chelsea ay diyaar u tahay inay ku qarashgareyso 75 milyan ginni xiddiga reer Jarmal, iyadoo Man United ay sii waddo la socodka xaaladda.
Sida laga soo xigtay Warsidaha Sport Buzzer, Havertz wuxuu door-bidi lahaa inuu u dhaqaaqo Kooxda Real Madrid waqti xaadirkaan.
Marka la eego saamaynta dhaqaale ee faafaha Coronavirus, Real Madrid ayaan awoodi karin inay ka soo baxdo qiimeynta Leverkusen ee lagu sheegay 90 milyan oo gini, iyadoo aan iska iibin dhowr ciyaartoy.
Dhinaca kale war kale oo dhawaan soo baxay ayaa sheegayey in Real Madrid dalab ay ku jiraan labo xiddig oo kooxdeeda ah ay ka gudbisay Havertz, inkastoo aan la sheegin labada laacib oo Los Blancos qeyb uga dhigi lahayd heshiiska laacibkan.
Kooxaha kale ee Kai Havertz xiisaha u qaba waxaa ka mid ah Kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich iyo tan reer England ee Arsenal.
Xiddig ka tirsan Kooxda Chelsea oo la sheegay inuu bartilmaameed u noqday Manchester United
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Kooxaha Man City vs Arsenal ka hor kulankooda Caawa ee Premier League… (Yaa xiddigaha ugu badan ku leh?)